तपाईं ब्राजिललाई छोड़ेर विश्वकपको कल्पना गर्नुसक्नु हुन्छ? - खबरम्यागजिन
तपाईं ब्राजिललाई छोड़ेर विश्वकपको कल्पना गर्नुसक्नु हुन्छ?
विश्वकप फुटबलको जहाँ कुरा हुन्छ, त्यहाँ ब्राजीलको प्रसङ्ग स्वतः उठिहाल्छ। तपाईं ब्राजीललाई छोड़ेर विश्वकपको कल्पना गर्नुसक्नु हुन्छ? अहँ सक्नुहुन्न। यो दक्षिण अमेरिका देश, जहाँ फुटबल धर्म हो, संस्कार हो। र, हो संस्कृति। ब्राजील विश्वको यस्तो एकमात्र देश जो एकैपटक पनि विश्वकपको मूल पर्वबाट टाढ़ा बस्नपरेको छैन।
सबैभन्दा ठूलो कुरा सर्वाधिक (पाँचपटक) विश्वकप जितेको रेकर्ड आफूसँग बोकेर हिँड़्छ, ब्राजील। मैदानमा ‘काला-सेता’ वर्ण भएका गजबका खेलाड़ीहरूले बल लिएर कुदिरहेको तपाईंले कल्पना गर्नुस्, ब्राजील आँखामा नाच्न आइहाल्छ तपाईंको। ब्राजील यस्तो देश जसले फुटबल कसरी खेल्छ र उपाधि कसरी जितिन्छ, सिकाउँछ। जसले प्रत्येक चार वर्षमा नयाँ नयाँ ‘ट्यालेन्ट’ विश्व फुटबललाई दिन्छ।
पेले, सोक्रेटस, रोनाल्डो, रोमारियो, रिभाल्डो, रोनाल्डिनो, गरिन्चा, जिको, काका, रोबर्टो कार्लोस, जेरिजिन्हो आदि यस्ता ब्राजीलियन ट्यालेन्ट हुन्, जसको फुटबल कौशल देखेर विश्वभरिका फुटबलप्रेमीहरू कायल हुन्थे। हेरेको हेर्‍यै हुन्थे। अहिले ब्राजीलसँग नेइमार, मार्सेलो, ग्राबियल जीजस, थियागो सिल्भा, फिलिप कोटिन्हो, केस्मेरियो, पाउलिन्हो, विलियम, फेर्मिनोजस्ता कोभन्दा को कम्तीका युवा ट्यालेन्टहरू छन्। यी सबैको केन्द्रमा नेइमार छन्।
नेइमार 26 वर्षे ब्राजीली निक्खुर ट्यालेन्ट। अहिले विश्वकै सबैभन्दा महँगो खेलाड़ी। स्यान्टोस फुटबल क्लबले हुर्काएको निखारेको जण्डा स्ट्राइकर। विपक्षी खेलाड़ीहरूलाई छक्याएर गोल गर्न माहिर यी खेलाड़ी। नेइमारमा गोल गर्ने र गोलको अवसर सिर्जना गर्ने जुन अदभूत कला छ, त्यसले उनलाई मेस्सी र रोनाल्डोको हाराहारीमा राखेको छ।
ब्राजीलियनहरूले नेइमारलाई पेलेसँग दाँजेर हेर्छन्। स्वयं पेलेले नेइमारमा आफू पाउँछन्। ब्राजीलले कहिले ओलम्पिक खेलको फुटबलमा गोल्ड मेडल जितेको थिएन। नेइमारलाई लाग्यो, ‘देशको लागि यो ठूलो रिक्तता हो। गोल्ड मेडल जित्नैपर्छ।’ सबै कुरा पन्साएर उनी ओलम्पिकको ब्राजीली फुटबल टीममा सामेल भए। भक्कुचुर खटेर खेले। आफ्नो कौशल देखाए। र ब्राजीललाई पहिलोपटक गोल्ड मेडल जिताए। आफ्नै देशमा भएको ओलम्पिकमा गोल्ड मेडल जित्नुको खुशी र उत्सव नेइमारको आँखा स्पष्ट देखिन्थ्यो। यो खुशीले चारवर्ष अघि आफ्नै भूमिमा भएको विश्वकपको सेमिफाइनलमा जर्मनीविरुद्ध बेहोरेको लाजमर्दो हारलाई बिर्साएको थियो। अहिले मैदान नयाँ छ। वातावरण बेग्लै छ।
प्रतियोगिताको स्तर उच्च छ। दबाउ सबैभन्दा बढ़ी छ। देश र देशवासीको मात्र होइन तर ब्राजीललाई चीयर्स गर्ने विश्वभरिका प्रशंसकहरूको सपना छ। आशा-भरोसा छ। यो सपना, आशा र भरोसालाई काँधमा बोकेर हिँड़नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व नेइमारमाथि छ। किनभने उनी ब्राजीलकै स्टार खेलाड़ी हुन्। साथी खेलाड़ीहरूका लागि ऊर्जा हुन्। प्रेरणा हुन्। नेइमार चम्के अवश्यै ब्राजीलको दावेदारी अझ बलियो बन्छ, यसमा दुईमतै छैन। आफ्नो श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्ने उनीअघि योभन्दा राम्रो अवसर अर्को छैन, यो कुरा नेइमारलाई राम्ररी थाहा छ। उनीसँग जुन टीम छ, त्यो गजबको छ। दह्रो छ।
एकसाएक जब्बरस्वाठ खेलाड़ीहरू छन्। केवल खाँचो छ, आ-आफ्नो प्रतिभालाई सामूहिकता टीम स्पीरिटको रूपमा मैदानमा देखाउने। पेलेले आफ्नो श्रेष्ठता प्रमाणित गर्दै विश्वकप जिताए। जेरिजिन्होले पनि ब्राजीललाई विश्वकपको उपाधि दिलाए। रोमारियोले पनि ब्राजीलको सपना साकार पार्दै विश्वकपको उपाधि उचाले। 2002 -मा जापान र दक्षिण कोरियाले आयोजन गरेको विश्वकप ब्राजीलले जित्दा रोनाल्डो र रिभाल्डो र रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डिनो र काफुहरू नायक बने।
अब यो दायित्व नेइमारहरूको काँधमा छ। ब्राजीलले विश्वकपको उपाधि नजितेको लामो समय भएको छ। 16 वर्ष छोटो समय पक्कै होइन। पछिल्लो विश्वकपमा आफ्नै आँगनमा ब्राजीलको सपना तुहेको थियो। यो ‘सपना तुहाइ’ कम पीड़ादायी थिएन। सबैभन्दा ठूलो पीड़ा नेइमारलाई सहेको थियो। कोलम्बियाविरुद्ध खेलिएको क्वार्टर फाइनल नराम्रो गरी घाइते भएपछि नेइमार प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका थिए। यस्तै लगातार दुई म्याचमा पहेंलो कार्ड पाएका कप्तान थियागो सिल्भा पनि सेमिफाइनल खेल्नबाट वञ्चित भएका थिए।
यी दुई महत्त्वपूर्ण खेलाड़ीको अनुपस्थितिमा कमजोर भएको ब्राजीलले जुन हार बेहोरे, त्यो ब्राजीलका कसैले भुल्न नसक्ने पीड़ा हो। विश्वकप अघिसम्म नेइमारको चोट निको हुन्छ/हुँदैन भन्ने अनिश्चितता हटिसकेको छ। पछिल्लो मैत्री खेलमा गोल गरेर नेइमारले आफ्नो श्रेष्ठता सबैलाई देखाइसकेका छन्।
98 दिनपछि मैदानमा फर्किएका उनी पहिलाकै लयमा देखिएका छन्, यो ब्राजीलियन फुटबलप्रेमीहरूको लागि सुखद कुरा हो। नेइमार भएपछि उनीहरू ढुक्क हुन्छन्/छन्। ओलम्पिकमा गोल्ड जितिसकेका नेइमारको लक्ष्य अहिले विश्वकप हो। अर्जुनले माछाको आँखामात्र देखेझैं उनले पनि विश्वकपको ट्रफी मात्र देख्नुपर्छ।
यसपटक पनि चुके अर्को चारवर्ष पुनः पर्खिनपर्नेछ। त्यसबेला उनी 32 वर्षका भइसकेका हुनेछन्। निश्चित छ, 26 -को नेइमारबाट उनका प्रशंसकहरूले जे चाहिरहेका छन्, त्यो 32-को नेइमारबाट पाउन गाह्रै हुने कुरा हो।
नाम : नेइमार डा सिल्भा स्यान्टोस जुनियर / जन्ममिति :5फरवरी 1992/ जन्मस्थान : साउपाउलो ब्राजील/ उँचाइ :5फुट9इन्च/ खेल्ने पोजिशन : स्ट्राइकर/जर्सी सङ्ख्या : 10 /वर्तमान क्लब : पीएसजी (फ्रान्स) /कुल क्लब म्याच : 439 /कुल क्लब गोल : 269 /अन्तरराष्ट्रिय म्याच : 84/ कुल गोल सङ्ख्या : 54 /विश्वकपमा उपस्थिति : दुईपटक(रूस विश्वसहित) /विश्वकपका कुल म्याच : 5/ विश्वकपमा कुल गोल : 4